Nnwom 93 NA-TWI - Ɔhene Nyankopɔn - Awurade yɛ ɔhene. - Bible Gateway
Nnwom 92Nnwom 94
Nnwom 93 Nkwa Asem (NA-TWI)
93 Awurade yɛ ɔhene. Ɔwɔ tumi ne ahoɔden. Wabɔ asase ma atim dennen na wɔrentumi ntu. 2 O Awurade, w’ahengua ase atim fi mfitiase na wowɔ hɔ ansa na wɔrehyɛ bere ase. 3 Ɛpo ase pɛɛ ma ne nne so, O Awurade; wɔma wɔn nne so woro so. 4 Awurade yɛ Otumfoɔ wɔ soro sen ɛpo nworoso ne n’asorɔkye a ano yɛ den. 5 Wo mmara tim hɔ daa, Awurade, na wo fi yɛ kronkron daa nyinaa.